Hevitra: ny iza, inona ary inona amin'ny marketing misy fiantraikany | Martech Zone
Ny sehatra teknolojia marketing sasany dia antitra toy ny divay tena tsara rehefa manohy manala ny olana mianjady amin'ny mpivarotra izy ireo. Fomba fisainana toa iray amin'ireo sehatra ireo. Raha nanao lahatsoratra izahay taona vitsivitsy lasa izay, sehatra kely tsara tarehy io izay nisy fiantraikany tamin'ny lohahevitra sy olona - tena ilaina tamin'izany fotoana izany. Taona maro taty aoriana ary sehatra marketing feno izay afaka manampy amin'ny famolavolana paikadin'ny votoaty ho an'ireo orinasa hahazoana fahefana amin'ny tsena manokana tadiavin'izy ireo.
Raha tamin'ny andro taloha, ny varotra sy ny marketing dia tsotra. Ny hany fampahalalana mety ho hitan'ny mpanjifa mety ho voafehinao dia ny alàlan'ny doka (Internet) aloha ary avy eo amin'ny tranokalanao. Avy eo ny varotra dia afaka mitroka, mameno ny sisa amin'ny fampahalalana, ary manidy fifanarahana. Ankehitriny, nivadika tanteraka izany. Mampiseho izany ny antontan'isa farany teo Ny 60% ny dia nataon'ny mpividy dia mitranga alohan'ny hanatonan'ny mpanjifa anao akory.
Izany 60% izany no antsoin'ny Appinions marketing tsy voafehy - Tsy fantatry ny marika izay novakian'ireo mety ho mpanjifany, aiza no namakiany azy, iza no nilaza hoe, iza amin'ireo hevitra an-tapitrisany amin'ny marikao no zava-dehibe, sns. Hatramin'izao! - Ny fiheverana dia manome anao izany fahitana izany ary mamela anao hery miasa mangina ireo teboka mikasika ny mpanjifa vaovao rehetra ireo.
Ho an'ny lohahevitra rehetra, ny Appinions dia mipoitra hoe iza no milaza inona, ary iza amin'ireo no tena manan-danja. Ny fironan'ny maso dia mihinana lahatsoratra an-tapitrisany an-tapitrisany isan'andro, ary mamakafaka izay miteny inona about izay lohahevitra, miorina amin'ny fikarohana fikarohana voajanahary tamin'ny taona Cornell. Tonga hatrany amin'ireo fanehoan-kevitra an-tserasera, an-tserasera, loharanom-baovao marobe, fahitalavitra ary media sosialy ireo teboka angona ireo.
Ny Dashboard Appinions
Amin'ny maha-mpivarotra anao dia azonao atao ny manao zavatra marobe amin'ireo angona ireo. Azonao atao ny manantona ireo mpanafika ireo ary mampahafantatra azy ireo ny vokatrao. Na azonao atao ny mampiasa ny angon-drakitra momba ny lohahevitra (izany hoe inona ny zavatra resahin'ny olona fa mamelona) hitarika ny paikadim-barotra momba ny varotrao. Na mety maniry hahita mpandahateny amin'ny hetsika iray ianao. Na mety te handrefy ny fahombiazan'ny famoahana vokatra sns…
Lohahevitry ny Appinion
Mombamomba ny Influencer tanteraka
Tags: fiheveranatahirin-kevitra mitaona ny fifaninananamarketing marketingplatform marketing marketingatiny misy herinyfamakafakana ny fahatsapanatabilao momba ny lohahevitra
Jolay 19, 2011 amin'ny 10:05 PM
Mahaliana izany. Hojereko izany. Miombon-kevitra amin'ny hevitrao momba an'i Klout aho.
Tena mahafinaritra io visualization io!
Aug 7, 2014 amin'ny 11: 43 AM
Nikaroka sy nanandrana sehatra marketing be dia be aho rehefa niara-nanoratra Influence Marketing: Ahoana no hamoronana, fitantanana ary fandrefesana ireo Influencers marika tamin'ny taon-dasa, ary na izany aza dia matoky aho fa ny Appinions dia iray amin'ireo orinasa feno indrindra. misy sehatra misy. Tena soso-kevitra.
7 Aogositra 2014 à 2:01
Sam - misaotra betsaka amin'ny fanamarihana. Ho an'ireo izay te hamaky ilay boky momba ny Influence Marketing – aza hadino ny maka ny bokin'i Sam! Influence Marketing: Ahoana ny fomba hamoronana, fitantanana ary fandrefesana ireo mpikatroka marika amin'ny marketing media sosialy (Que Biz-Tech)